Uyenza njani indlela yokuhlela kunye namaphepha aphezulu kwi-Indesign | Izidalwa ezikwi-Intanethi
UPablo Gondar | | Izixhobo zoYilo, Tutorials
Njani yenza iprojekhthi yokuhlela usebenzisa iphepha eliyintloko kwi Isimilo Yinkqubo ethatha ixesha elide ukusebenza kunye nokucwangciswa kwangaphambili apho ulungelelwano kunye ntlangano Umxholo ziyinxalenye ezibalulekileyo ukufikelela kwisiphumo esihle. Ukusuka kwiincwadi ukuya kwiimagazini zibekwa ngendlela enokuthi yonke imixholo yazo ichithwe ngendlela ecwangcisiweyo.
Las iphepha eliyintloko bacinga ukuba a ingongoma ephambili ngaphakathi kweprojekthi yokuhlela njengoko isivumela yenza izitayile zephepha eyahlukileyo esiya kuthi siyisebenzise kwiindawo ezahlukeneyo zeprojekthi yethu. Inkqubo ye- iimagazini namaphephandaba Ziyilelwe ngamaphepha aphambili apho utshintsho loyilo ngalunye luxhomekeke kwimfuno. Uyilo olufanayo oluphindaphindiweyo lwenziwe ngale nkqubo kuba isivumela ukuba sitshintshe umxholo ngaphandle kokuphulukana noyilo lwephepha.
Xa usenza iphepha eliyintloko kufuneka funda iprojekthi yethu kwaye uthathe isigqibo kwangaphambili ukuba zingaphi izimbo zamaphepha esiza kuba nazo kwiprojekthi yethu yokuhlela, nje ukuba isigaba sokuyila sivaliwe singagxila kuyo beka izitayile zekhasi.
ukuba ukuqonda ngcono ukuba yintoni isitayile sephephaInto esinokuyenza kukujonga ezinye iimagazini kwaye sijonge indlela uyilo lwekhasi oluphinda-phindwa ngalo kodwa ngomnye umxholo, umzekelo, kukho umxholo oya kuhlala ufana kwaye ubekwe kwindawo enye, yile Ityala le abamakishiinombolo yephepha, icandelo ... njl. Ezi iindawo ezihlala ziphinda zenziwe zisebenzisa iphepha eliyintloko ukuze usebenze ngesitayile sephepha elifanayo kaninzi.
Kutheni le nto izitayile zamaphepha zenziwe ngokusekwe kumakhasi aphezulu?
Ukuyila imagazini uhlala usenza ifayile ye- setha uhlobo loyilo eya kuthi ibonakalise uhlobo olubonakalayo lweli phephancwadi ukugcina isazisi esibonakalayo phambi komsebenzisi. Kwelinye icala, xa usebenza kwifayile ye- uyilo ngokukhawuleza nangokucocekileyo eyona ndlela yokuyenza kukusebenzisa la maphepha aphambili.
ukuba yenza iphepha eliyintloko kufuneka siye kwimenyu ngasekunene phezulu Isimilo, sicinezela iqhosha le mouse lasekunene kule menyu kwaye senze iphepha elitsha eliyintloko. Umxholo ngu yenza amaphepha amaninzi enkosi kwaye zinike zonke amagama ezisinceda ukuba siziqonde ukuze sisebenze ngendlela enocwangco.
Uyilo lwephepha eliyintloko akukho sidingo sokubeka isicatshulwa okanye imifanekiso yenza ubeko ngaphandle komxholo, eyona nto ifanelekileyo kukukhetha kule ndawo ifonti kunye nomzimba webhokisi nganye yokubhaliweyo kodwa ngaphandle kokubhala nantoni na ngaphakathi.
Senza i ubeko lwephepha ngalinye eliyintloko Ngokusekwe kwiimfuno zethu, ukongeza umxholo kuphela kwiibhokisi (isicatshulwa / imifanekiso) kodwa ngaphandle kokongeza umxholo, senza iibhokisi kuphela kodwa ngaphandle kokubeka nantoni na ngaphakathi. Xa sele sinamaphepha aphezulu alungile, esikwenzayo kukubarholela ezantsi ngaphandle kwendawo yamaphepha aphezulu. Ukuba sijonga ngocoselelo kule miqolo siya kufumanisa ukuba umaleko ngamnye unonobumba, le leta isixelela ukuba leliphi iphepha eliyintloko lolo luhlu.
Ukusebenza kunye namaphepha aphezulu kuya kuthi ukuba sisebenze ngobuchule ngakumbi ngelixa sonyusa imveliso yethu kolu hlobo lweprojekthi ebonakalayo. Yenza ezakho izitayile zazo zonke iintlobo zoyilo kwaye uzigcine ukuze ziphinde zisetyenziswe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izixhobo zoYilo » Uyenza njani iProjekthi yokuHlela usebenzisa iiPhepha eziPhezulu kwi-Indesign
Uyenza njani into yokuhlekisa ngamanyathelo asi-8 kuphela